Friedrich Schiller University of Jena - Waxbarashada Europe
gaabinta : FSU
aasaasay : 1558
Ardayda (qiyaastii.) : 19000
Ha iloobin in aad wada hadlaan Friedrich Schiller University of Jena
Qorto Friedrich Schiller University of Jena
Friedrich Schiller University Jena waxaa jaamacadda cilmi dadweynaha ku yaalla Jena, Thuringia, Germany.
Jaamacadda waxay ku sii dhisnaatay 1558 oo waxaa lagu tiriyaa ka mid ah 10 jaamacadaha ugu da'da weyn Germany. Waxaa la xiriir la leh 6 Kooxda ku guuleysatay Nobel Prize, ugu dhawaan in 2000 marka graduate Jena Herbert Kroemer ku guulaystay Nobel Prize ee physics. Waxaa la baxshay ka dib markii Abwaan Friedrich Schiller oo lagu barayay sida professor of falsafada markii Jena soo jiitay qaar ka mid ah maskaxda ugu saameynta badan ee Warega of qarnigii 19aad. Iyadoo Karl Leonhard Reinhold, Johann Gottlieb Fichte, G. W. F. Hegel, F. W. J. Schelling iyo Friedrich von Schlegel on Macalimiin ay, Jaamacada ayaa xarunta of ah ee Niyadda Jarmal iyo nasjonalromantiske hore.
Sida of 2014, jaamacadda ku dhawaad 19,000 ardayda iyo 375 Professor. Madaxweynaha iminka, Walter Rosenthal, waxaa loo doortay in 2014 for a 6 sano dheer.
University Friedrich Schiller ee Jena, asaasay 1558, iyadoo ay 21,000 ardayda loo qaybiyey in ka badan toban kulliyadaha kala duwan ka baxo ay calaamaddu on image ee magaalada. Ardayda labada jaamacad ama jaamacadda ee xirfadaha inaad mid quarter of deggan Jena. Sidaas, waa xaq oo dhan, in la yidhaahdo: Ma jirto jaamacad ku Jena, Jena waa jaamacad! Qiyaastii 340 Professor iyo 6,400 xubno ka mid ah shaqada shaqaalaha isbitaalka jaamacadda iyo jaamacad, dambaysta ah kuwaas oo Soha oo soo koraya ka mid ah isbitaalada ugu casrisan ee Germany galay.
Jaamacadda dhigeysa xoogga daran daryeelka ardayda, oo ka shaqeeya on abuuraya a “Ardayda’ Jannada in Jena. barnaamijyo gaar ah u taageeraan ardayda ka timi dalka dibadiisa. Marka ay timaado in baridda, University Jena isku dhaqan iyo hal-abuurka: ka daawo reebo, physics, cilmi nafsiga, cilmiga ganacsiga iyo dhaqaalaha, ama sports, bio iyo bulshada cilmiga – kuwaas oo dhammaantood yihiin heer sare kaalinta – waxa loogu yeero “maadooyinka yar”, sida tusaale ahaan caucasiology, waxbarashada Romania ama Indo-Germanic, waxaa soo gaaray. kala duwan ee fursadaha waxbarasho ee jaamacadda classical kaliya Thuringia ee Sawira muuqashadeeduna sidoo kale ay dabeecad: inay wax ka qabtaan oo aan xadka – interdisciplinarily iyo caalamka. Sidaa darteed, profile ah cilmi-cad ayaa la aasaasay oo la sii horumariyo doonaa. profile cilmi hadda University Jena ayaa ka kooban yahay shan goobaha cilmi mudnaanta:
optics, Photonics iyo Photonic Technologies
Qalabka cusub iyo Technologies
Dynamics of Systems Biological Complex
Laboratory kutub ku
Shakhsiyaadka iyo Change Bulshada
Waxay ay dhammaystirmaan by saddex tacliinta cross-qaybood:
Falanqaynta iyo Management of Systems Complex;
Xaalado Dhaqanka ee Gabawga;
Europe ee Asal: Dhaqanka iyo Diinta ee World Baydka iyo qarniyadii dhexe
Up-iyo-soo socda saynisyahano yar yar si wanaagsan ugu diyaargaroobaan mustaqbalkooda ciyaareed tan iyo markii ay waxaa taageera Jena Graduate Academy ah. Iyadoo in, mawduuca muhiim ah “daryeelka caruurta” u muuqataa on ajandaha ee jaamacadda. Sida mid ka mid ah Aasaasayaasha ah “Jena Alliance for Family”, University Jena u taagan tahay waafaqid ee haysta carruurta iyo waxbarashada. Waayo, kanu, waxa uu ku helay Award ee Total E-Quality. Schiller University Friedrich ayaa sidoo kale caalamka si fiican u caan ah: Waxaa lagu daray shabakadaha muhiim ah, sida Group Coimbra ah, iyo iskaashi leh in ka badan 100 jaamacadaha ama xarumaha waxbarasho ee dunida oo dhan. Iyada oo ku dhowaad 300 Wada-hawlgalayaasha gudahood Europe sarrifka ah cad ah ardayda iyo macalimiinta waa ka dhacaya.
In 2008 Jena ayaa loo dhigay horyaalka Germany ee “City of Sciences”. 2008'S dhacdooyinka ayaa si xoogan u saameeyeen hawlaha jaamacadda ee. Oo, mustaqbalka, jaamacadda doonayo in la joogteeyo saameyn xoog leh ku baridda, cilmi-baarista iyo dhaqanka, umadeed iyo kuwa caalamiga.
Cilmiga Bulshada iyo Dabeecadda
Xisaabta iyo Sayniska Kombiyuutarka
Chemistry iyo Earth Sciences
Biology iyo Farmashiyaha
Muddo sannado yar kacaanka siyaasadeed ee East Germany magaalada yar Thuringian jaamacadda ee Jena ayaa Kaltum Sh galay xarun caalami ah la taaban karo ee waxbarashada. jawi isbedel waa xukuma, laakiin inkastoo this bilowga cusub ee ka mid ah dib u qurux dul xeerkii grand: Goethe, Schiller, Hegel iyo Fichte tagay ay calaamaddu ku saabsan nolosha caqliga, Abbe, Zeiss iyo Schott aasaaska dhigay dhaqaale baraara.
The qallafsan 25 000 ardayda ee Friedrich Schiller University iyo University of Applied Sciences siin kartina u ah waari dhallinyarada oo magaalada ka mid ah 100 000, kaas oo la hareereeyey by qarar muschelkalk iyo cunugtii oo fantastik ah ee dooxada Webi Saale. Generations mid ah gabayayaashiinnu, faylosuufiinta iyo ardayda ka gabyeen ammaan ay song iyo gabayada, laga yaabee ugu qurux badan Gottfried Benn: “Jena ina hor, oo ku tiil dooxadii farxad“. Meel kacdo dhaqanka waa baxsan Karin — dhammaan ayuu ka sarreeyaa, in nasjonalromantiske, Classicism, iyo maalmaha hore. A si gaara habka ardayga nolosha ayaa sidoo kale bilaabay in Jena iyo socdeen in ay raad aasaasiga ah ee siyaasadda sare: tani waa meesha bahda ardayga ugu horeysay sameeyay, kuwaas oo madow-cas-dahab banner, maanta midabada qaranka, ayaa u ishaaray ruux dimuquraadiga ah ee midnimada, caddaaladda iyo xorriyadda tan iyo kulanka ugu Wartburg ee 1817. Fraternities laga yaabaa in aan ciyaaro badan oo door qarnigii 20aad dabayaaqadii Jena, laakiin xasuusta of bixitaanka this dimuqraadi ah waa la ilaaliyay ma aha oo kaliya by kuwaas wearers ee marsami midabo iyo u saftay.
isbedello gun iyo bixitaanka ka ee la soo dhaafay waxay u muuqdaan in ay had iyo jeer ahaa qaaska ah Jena. Markii ay labada Professor ugu horeysay, Stigel iyo Strigel, oo ay 171 ardayda u dhaqaaqay Jenense Collegium ah, hore keniisad Dominican a, in 1548, ay madax bannaan, Johann Friedrich aan, wuxuu weli joogay xabsiga Imperial. Sida “horgalaha” oo ka mid ah isbahaysiga Protestant Schmalkaldian Wettin Doorashooyinka Prince uu guuldarro millatari musiibo ka dhanka ah taajka Catholic iyo lahaayeen in ay ku wareejin kursigiisii ​​jir ah oo jaamacad in Wittenberg uu adeer u nebcaaday Moritz. In dhulka hadda ka yar oo uu ku xukumay, taas oo uu aad u wiiqmey ay size hore mid ka mid ah saddex-meelood meel, uu u doortay Weimar sida kursiga cusub ee dawladda iyo aasaasay magaalada dariska ah ee landholders yar oo khamri-beeralaydu Hohe Schule a (college) tababarka ee kirishtaan Protestant iyo macalimiinta. qiimo leh oo kaliya “Location Electoralis” ee Friedrich falsan ayaa la badbaadiyey iyo ka keeneen Wittenberg in Jena.
Oo wakhtigii hore ee ku cusub tacliinta lama si sax ah si diiran u soo dhaweeyay, — dhaafka ah Professor ka cashuurta khamriga iyo dhaqan xunxunna-iyo-diyaar u ah ardayda ay, kuwaas oo ay sabab u tahay heerka badan oo madaxbannaani sharci qoom aan lagu soo oogi karin maxkamadaha maxaliga ah, ahaayeen qodax in dhinaca muwaadiniinta qumman. caqligoodu, si kastaba ha ahaatee, bini'aadamnimada ah, machadka dib u habaynta ku wajahan sameeyey aadamiga degdeg ah ee ay horumarinta; by bartamihii 1550s-Jena hore loo arkaa xarun keentay toobad, iyo edition Jena shuqulladiisa Luther ayaa badisay mashruuc tartamaya at Wittenberg. Laakiin waxa aan ahaa ilaa 1558 in Hohe Jena ku Schule helay mudnaan Imperial sida jaamacad.
Ku dhowaad 100 sano ka dib, out of hore jaamacad ah dib u habaynta Zaman oo casri ah afar kulliyadood — Philosophy, Theology, Sharciga iyo Medicine — ayaa samaysay bulshada cilmi leh dano aad u kala duwan ah. The xisaab iyo astronomer Weigel, kaas oo baray Leibniz, iyo kuwo kale, waxa loo arkaa mid ka mid ah aasaasayaasha fikirka cilmiyeed. Kuwanu waa xididdada jaamacadda oo, mar ubaxu, kasban lahaa epithet ah “hoarder aqoonta”. Qofka ka mid ah iska tegey si uu u muujiyo ammaantaada oo sare oo caynkaas ahayd, sida “Kormeeraha Guud ee Tallaabooyinka Direct ee Sayniska iyo Art”, ma aha ugu yaraan aan u mahad celiyo waayo, horumarinta this: xildhibaanka ku jira Johann Wolfgang von Goethe hab diiwaan yahanno Madaxdii Gaalowday oo cilmi-galay duchy gobolka yar iyo si nidaamsan u abuuray xaalado fiican ee ay shaqadooda. maktabadaha, beero botanical, a archive taariikhda dabiiciga ah iyo laboratories ku jiray oo dhan ku xiran in uu fikrad maaliyadeed ee si. la Hay'adaha sida fiirinta iyo ururinta mineralogical dib u ogan karo in uu initiative. Isla mar ahaantaana hamiga sayniska gaar Goethe ayaa u taraysaa ka kaabayaasha this. Wuxuu si dhow ula shaqeeyay farmashiyaha Doebereiner, aasaasihii nidaamka wareegsan, iyo anatomist ku Justus Loder. Uu search guul lafta intermaxillary waxaa loo arkaa mid ka mid ah tusaalooyin horeeya ee cilmi-baarista caafimaad oo lala beegsaday xilligii casri ah; tijaabooyinka diyaariyey by Abwaan-amiir isaga qudhiisa ayaa weli sii raagayaan ee Collection jireedka ee Jaamacadda Jena.
gaaray, in kastoo, ee sano yaab classical-ka taataabtay ahayd aroortii hore ah “network”, taas oo ku hoos jira xaalad qatar ah soo ururiyey Halyeeygii caqliga cajiib ah in hal meel ah. Hegel, Fichte iyo Schelling, Voss, walaalaha Schlegel iyo Friedrich Schiller — sida professor of taariikhda — oo dhan wax bari jiray ee magaalada on Saale ah, halka Novalis, Hölderlin, Brentano, Föbel iyo Arndt in muxaadarooyin ay fadhiistay.
Maalmahan ma aha oo kaliya magacyada waddooyinka iyo dabarro, laakiin sidoo kale jacayl soo celiyey dhismayaasha, u markhaati fura in muddo this: gurigii beerta tusaale ahaan Schiller ee, Fichte ee degmadiisa, joogitaanka kormeeraha ee Goethe ee jardiinooyin botanical, ama House Fromann ah, taas oo maanta u adeegtaa sida machadka ah culimada ka mid ah German iyo taariikhyahanadu tahay. fiirsashada yaabo dhaqanka gelin sannadahaas, taasoo ku calaamadsan bilowgii ruuqaansanayo xagjirka ah ee dhaqanka iyo sayniska ee caasimada mataanaha guri ammaan Ernestine ee, hadda waa mawduuca DFG ah (Jarmal Golaha Cilmi baarista) Iskaashatadu Project Research “Weimar The – Jena. Dhaqanka ku xeeran 1800”.
Laakiin aasaaskii sumcad caalami ah Jena ee xarunta warshadaha looma abuurin ilaa saabsan 70 sano ka dib ay koox xagal ah ee shaqsiyad — mar kale jaamacadda. Zeiss ee injineernimada sax iyo dhirta optics iyo kiimikada muraayad u shaqeeyo Schott & Gen. wuxuu yimid isagoo shiidaa sida shirkadaha wareejin-off ka mid ah Mater Alma ah — badan si la mid ah sida dad badan oo kale umay nooleynta ee Germany sida goob-teknoolojiyad sare ah iyada oo loo marayo dovetailing dhow sayniska iyo ganacsiga adduunka. Qaabkan iskaashiga u dhexeeya jaamacadda iyo warshadaha waxaad fartaan si dabiici ah Jena, sida ay ahaayeen.
wadadii uu soo if-galay da'da warshadaha waxaa loo soo dhiibay Ernst Abbe (Professor Associate magacaabay 1870), kuwaas oo, halka weli in uu 30-hore, horumariyo uu aragti of formation image microscope, oo qaaday tixgelin ugub ku caan of diffraction, oo sidaas sameeyey boodboodi dhismaha microscope ka maxkamad iyo qalad in design Nidaamsanaan. Waxa uu la siiyey guddiga this by makaanik jaamacad, Carl Zeiss, kuwaas oo si joogto ah kaamilayna dhismaha qalabka indhaha ku seminaaro gaar ah oo uu. Otto Schott, kuwaas oo uu doctorate helay at Jena in 1875, ahaa saddexaad galo isbahaysiga this by aasaasay, at Abbe ayaa ku boorriyay, a “Laboratory for Glass Technology” in 1884, si loo soo saaro ee lenses aadka saafi gaar ah microscopes Zeiss iyo qalab indhaha. ardayga Humboldt ee Matthias Jakob Schleiden, Professor of cilmi barasho dhir iyo caan ku tahay oo uu aragtida cell, dhiirigelinayaa — iyo ka dib ka faa'iideystey — habka this, kaas oo ahaa in la caddeeyo dayan ee taariikhda dhaqaale Jarmal.
Guusha geedka Zeiss keenay badan oo shaqaalaha aqoonta sare in magaalada, iyo dadka soo maratay kacay 150% wakhtiga ka 1870 si ay u soo noqdo qarnigii, si qallafsan 25 000. Tani barwaaqo cusub, oo Zeiss iyo Abbe lala wadaago shaqaalaha iyada oo loo marayo qaynuun hormuudka bulshada iyo Isbadal hore ee ganacsiga galay aasaas, sidoo kale ayay koreen oo faa'iidada ah ee magaalada iyo jaamacad: tusaale ahaan Volkshaus ah, xarun dhaqan iyo hoolka xafladaha, waxaa la dhisay lacag Zeiss, oo markay Professor iyo ardayda wareegay dhismaha cusub on guuradii 350aad ee jaamacadda ee 1908, tabarucaadka Zeiss Foundation ma waxay ahaayeen ugu yaraan aan u mahad celiyo waayo, kanu. Deeqdan ayaa ugu weyn hal gaarka ah qaab-dhismeedka qurxoon Art lacagta badan by caanka ah kaniisadda iyo naqshada tiyaatarka Theodor Fischer ka Otto Schott yimid.
The time-taako u dhexeeya Gründerzeit iyo Republic Weimar yahay, waayo, Jena sida xarunta a casriga ah ee waxbarashada, laga yaabaa in ka badan oo muhiim ah ka badan xilligii marar badan ku xusan classical-jaceyl. nin cilmiga nafleyda barta The Ernst Haeckel, theorist ugu muhiimsan evolutionary ka dib markii Darwin, baray in Jena, siday sameeyeen reer xisaab iyo logician Gottlob Frege, kii taasoo keentay faylosuufiinta casriga ah Anglo-Saxon tixraacaan sida saamayn. Sidoo kale xusid mudan tahay Hans Berger, kuwaas oo laga helay electroencephalogram ah (EEG), dhakhtarkaasi Otto Binswanger, falsafo Rudolf Eucken, taariikhyahan Johann Gustav Droysen iyo Alexander Cartellieri, philologists ku Sievers iyo Delbrück, dibuhabaynta barbaariyayaasha ay qoreyso iyo Petersen, jurist ku Eduard Rosenthal iyo Max Wien, mid ka mid ah Horseedka ah telegraphy wireless. Jena riyaaqay ay ka talinaysay ee farshaxanka in ay wax-uqabso goobada wajahan mid ah fannaaniinta ku nuuxnuuxsan Eberhard Grisebach iyo Botho Graef mahad: ka dib fadeexadii in Weimar Auguste Rodin helay doctorate sharaf in 1905, iyo in sano ah 1907-09 Ferdinand Hodler abuuray rinjiyeynta caanka taariikhi “ardayda Jarmal baahinaya ee Dagaalkii of Liberation of 1813” waayo, hool muxaadaro jaamacad cusub. Shaqaynta booqashooyinka iyo bandhigyo by Expressionists sare iyo xiriir si Bauhaus Weimar ka tagay ay ku ganaya on nolosha farshaxanka ee magaalada.
Inkastoo — ama laga yaabee in si hufan sababta oo ah — ay cimilada libertarian burburkii adag dhacay intelligentsia Jena ee ah 1920 bartamihii. Fikrada ah jaamacad model Socialist National si deg deg ah soo galay isagoo, iyo wakiilo ka keenta aragti jinsiyadeed iyo UCID halkan ka taagay — kaydsho degdeg ah xerada fiirsashada Weimar-Buchenwald.
Ka dib markii wajigii kooban oo ku saabsan habeynta ka dib 1945 Mater Alma mar kale helay qabtay qulaya ee fikirka siyaasadeed, oo waxaa haatan la filayaa inuu xuubsiiban galay “jaamacadda hantiwadaagga”. The calaamad ugu waawaynaa ee kanna waa “cilmi-dhaadheer”, dhisay ka 1967-72 sida uu qorshaha by Xiddiga GDR dhise Herbert Henselmann oo asal ahaan loogu tala galay VEB Carl Zeiss dawladdu leedahay ee, galay oo aqoonyahano ku lahaa inuu u dhaqaaqo. At 127m signal this caan ka mid ah munaaradaha naqshadaha talisnimo hantiwadaagga magaalada on Saale kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee: in ay hooska baxay jawi iska caabin qarandumis, iyo Jena waxaa loo arkaa mucaaradka ee GDR ah qalcad.
In 1989 Professor iyo ardayda wada banaan baxeen waddooyinka; caqabadaha xorriyadda xagga maskaxda ayaa laga yaabaa in laga dareemay meel si oppressively sidii beerihii cilmi-baarista iyo waxbarashada. Isla markii kacaanka siyaasadeed ee University of Jena qaadeen tallaabooyin aad u daran oo adag: macalin kasta waxaa lagu qiimeeyaa, oo ka mid ah qaybaha hore ee hadda jira la sameeyey tobankii Caqlina contoured a, classical, jaamacadda oo dhamaystiran — jaamacadda oo keliya sida in Thuringia. campus cusub waxaa la aasaasay on goobta hore ee warshad weyn ee Zeiss qalbiga magaalada, iyo mashruuca dhismaha billion-sumadda “University Clinic 2000” helay socda. In jihada barnaamijka waxbaridda ay jaamacadda sidoo kale kor u qaaday dhaqanka jir ah: aadka kala duwan falsafada Kuliyada, tusaale ahaan, kaas oo u muuqda “qalaad” beeraha sida Baydka Oriental, Studies Caddaan iyo Indo-Germanic helay guri. Ama in kulliyadeeda Caafimaadka, kaas oo la wareegay doorka daryeel-sare oo dhan Thuringia ay rugta 1400-ka sariirood. Dabcan physics iyo cilmiga noolaha mudan xusid.
Helitaanka iyo shabakad cilmi xidhiidh dhow yihiin waxyaalaha qarsoon ee hormariyo ee magaalada on Saale sida xarun waxbarasho. Agaasimayaasha badan iyo madaxdii waaxda machadyada jaamacad ahayn in Jena sidoo kale qaban professorships jaamacadda. Beyond this Jena Uni ku haysaa isbahaysiga jaamacad la Halle iyo Leipzig a. la wadaago, Marar badan mashaariicda maadooyinka, e.g. shantii DFG si wadajir ah Xarumaha Research iyo toddoba Innovationskollegs (taxane muxaadaro), waa natiijada dabiiciga ah. Tani cimilada bacrin ah oo uur leh ayaa la keeno ku saabsan xarig ah oo dhan tallaabada aan caadi ahayn oo rajo in cilmi-baarista, kuwaas oo qaar badan lagu eryaday ku salaysan duruusta kala shabakadaha iskaashi gudahood.
Laakiin cimilada ee Jena sidoo kale u muuqata in ay saamayn togan ku baridda: xidhiidhka ka dhexeeya talinta ardayda iyo macallimiinta waa isu eego wanaagsan, — runtii si sida xad ay rajada dabcan degdeg ah oo degdeg ah ee barashada cilmiga la aaminsiiyey tiro muuqata badan oo ardayda u siin marks top Alma Mater ay ka galay qiimeynta ugu dambeeyey by jaamacad “Spiegel”, “Stern” iyo “Stiftung Warentest”. Waa goolkii ugu badan ee dadka mas'uulka ka ah jaamacadda, iyo heerka magaalada iyo gobolka in horumarka waa sii kala go '.
Ma rabtaa wada hadlaan Friedrich Schiller University of Jena ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Friedrich Schiller University of Jena rasmiga ah Facebook
Friedrich Schiller University of dib u eegista Jena
Ku biir si ay ugala hadlaan of Friedrich Schiller University of Jena.
Charite – University Medical ee Berlin Berlin